Voafantina hofidiana hahazo loka Game Changer ny Global Voices Online · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2010 20:32 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Nederlands, русский, bahasa Indonesia, বাংলা, Português, Español, English
Vao voafantina hisafidianana anatin'ny dingana famaranana ao anatin'ny Loka We Media Game Changer 2010 (loka We Media mpanova lalao 2010) ny Global Voices Online. Voafantina ao anatin'ny lisitry ny olotsotra, tetikasa ary fikambanana voafantin'ny valam-piarahamonina ankapobe We Media ny GVO.
Hoy manko ny We Media:
Mitarika ny olona ho amin'ny fahalalana ny Game Changers (Mpanova Lalao). Misarika (ny olona) hiditra an-tsehatra sy handray anjara amin'ny alalan'ny media (fifampitam-baovao) ry zareo, Ka ankalazainay ny zavabitan'izy ireo mandritra ny We Media Miami, fivoriam-pihavaozana fanao isan-taona ka lasa votoatim-pandaharana ny tantaran'izy ireo. Manome ohatra ry zareo, manome tsela-kevitra sy aingam-panahy ho an'ny mpitari-dalana sy mpitsinjo ny ho avy (visionnaires) amin'ny sehatra rehetra amin'ny alalan'ny fomba fitarihana hiserasera sy ho lohalaharana eo amin'ny fiaraha-monin-tserasera.
Hahazo anjara fitenenana mandritra ny fivoriana Fivoriana We Media fanao isan-taona izay hotontosaina anyamin'ny Anjerimanontolon'i Miami ny 9-11 marsa 2010 ho avy izao ny olo-tsotra na fikambanana mahazo vato be indrindra amin'ny famaranana. Asaina hanatrika izany avokoa ny voafantina rehetra mandritra ity fihaonana ity.
Miangavy anareo izahay hametraka ny safidinareo ato ho mari-panohananareo ny Global Voices Online ho 2010 We Media Game Changer na Mpanova lalao We Media 2010. Mifarana amin'ny 3 febroary 2010 amin'ny 11:59 alina ora Etazonia atsinanana ny fifidianana.